Ciidamadii dawladda ee laga saaray Beledweyn oo abaabul colaadeed ka wada deegaanno isla gobolkaasi ka tirsan. – Radio Daljir
Ciidamadii dawladda ee laga saaray Beledweyn oo abaabul colaadeed ka wada deegaanno isla gobolkaasi ka tirsan.
Beledweyn, Nov 15- Deegaanno ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo military oo ay wadaan ciidamo ka tirsan dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, taas oo ku abbaaran qabsashada magaalada Beledweyn.
Ciidankaan oo ahaa kuwo horay looga saaray deegaanka gobolka hiiraan dagaallana looga qabsaday magaalada Beledweyn, ayaa isku aruursaday dhawr goobood oo ku yaalla gobolkaasi, waxayna ku tallamayaan in ay mar kale gacanta ku dhigaan magaalada Beledweyn ee haatan ay ka arrimiyaan xoogagga dawladda ku kacsan.
Afhayeen ciidanka dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ee gobolka Hiiran Cali Joof, oo ay waraysatay idaacadda Daljir ayaa sheegay in wadaan abaabul xooggan oo ay ku damacsan yihiin in ay ku qabsadaan gobolka Hiiraan gaar ahaanna magaalada Beledweyn.
Afhayeenku waxaa uu sheegay xoogagga gacanta ku haya magaalada Beledweyn in ay magaaladaasi iyo deegaanno kaleeto oo isla gobolkaasi ka mid ah ay ka gaysteen gabood fallo dhan ka ah bani?aadantimada oo lagu ugaarsanayo wax ku oolka bulshada, taas oo uu ku tilmaamay in ay tahay midda ay ka dhiidhiyeen waa sida uu hadalka u dhigaye.
Xilligaan meelo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaa gacanta ku haya xoogagga mucaaradka ah ee dawladda ku kacsan, kuwaasi oo iyaga laftigoodu ku kala aragti duwan hab maamuleedka gobolkaasi.
Magaalada Beledweyn muddooyinkii ugu danbeeyey waxay saaxiib la noqotay is bad-baddel maamul oo is daba joog ah, waxaana dhawr jeer la kala wareegay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa mucaaradka oo xilligaan gacan hayntooda ay ku danbaysay.